मतदाता नामावली र परिचयपत्र छपाइ आजदेखि » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मतदाता नामावली र परिचयपत्र छपाइ आजदेखि
आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६ मा प्रकाशित !
२० चैत, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आइतबारबाट मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रको छपाइ सुरु हुने बताएको छ । आयोगले एक करोड ४० लाखभन्दा बढी मतदाता हुने अनुमान गरेको छ भने आइतबार बस्ने बैठकले मतदाताको ठ्याक्कै सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
प्रमुख आयुक्त यादवले सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाको बलभन्दा पनि बुद्धि बढी लगाउन निर्देशन दिनुहुँदै आइपरेका समस्याको समाधान वार्ता र संवाद गरेर समाधान गर्नुहोस भने । निर्वाचनमा खटिने चारवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको शनिबार समापन गर्नुहुँदै यस्तो उनले धारणा राखेको हो ।
नेपालका सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा सुरक्षा दिनका लागि समक्ष छन भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमै शान्तिपूर्ण रूपमा अरू कसैले मतदान केन्द्र कब्जा गर्न सक्छ, यस्ता घटना भएका पनि छन्, त्यस्तो हुन नदिन र आफ्नो पोशाकको मर्यादा राख्न अनि कठिन समयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ भने । उनले निर्वाचनमा हत्या, हिंसाको वातावरण कतै नहोस्, उम्मेदवारले सहज रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सकून र मतदाताले मतदान गर्न सकून भने ।
प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७४४ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृत आइतबार नियुक्त गरिने जानकारी दिए । आइतबार बस्ने बैठकले ७५ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ जना मतदान अधिकृत नियुक्त गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्री आयोगले प्राप्त गर्ने क्रम सुरु भएको जानकारी दिँदै उनले मतपत्रको छपाइ कार्य द्रुतगतिमा भइरहेको बताए । सानो समस्या परेमा पनि प्रहरीकहाँ जाने प्रचलन रहेको सन्दर्भ औँल्याउँदै तपाईंहरूले लगाएको पोशाकले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताए ।
यसैगरी आयोगका सुरक्षा समितिका संयोजक तथा आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा मनोवैज्ञानिक सुरक्षाले पनि धेरै काम गर्ने हुँदा सोही अनुसारको सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिँदै स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ भने ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको जानकारी सुरक्षाकर्मीलाई दिए । यस्तै सहसचिव नवराज ढकालले यसपटकको निर्वाचनमा करिब तीन लाख ६६ हजार उम्मेदवार हुने अनुमान छ, त्यसै अनुसारको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायसँग आग्रह गरे । मतदाता नामावली र परिचयपत्र आयोगमै छापिने
आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्नका लागि आयोग परिसरमै अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिनसहित कटिङ गर्ने र लेमिनेसन गर्ने मेसिन पनि जडान गरिसकेको छ । परिचयपत्र छपाइको जिम्मा पाएको ॐनी बिजिनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ॐनी समूह)का जेनेरल म्यानेजर पारस केसीले मतदाता परिचयपत्रको छपाइका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
सो समूहले परिचयपत्र छपाइका लागि छाप्ने मेसिन, कटिङ मेसिन र लेमिनेसन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ५० वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको छ । छपाइका लागि हरेक दिन तीन समूहमा दुई सय जनाका तीन सिफ्टमा गरी जम्मा छ सय कर्मचारी खटिने जानकारी पनि केसीले दिए । एउटा परिचयपत्रको छपाइ गर्न नौ रुपियाँ उनान्सय पैसा पर्नेछ । यो परिचयपत्र नयाँ संरचना अनुसार नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो औपचारिक परिचयपत्र हुनेछ । यो परिचयपत्र अत्याधुनिक प्रविधि अनुसारको हुनेछ । छपाइका लागि करिब २० दिन लाग्ने जानकारी जेनेरल म्यानेजर केसीले दिए ।
यसैगरी आयोगले एक करोड ४० लाख मतदाता नामावलीलाई पनि आइतबार बस्ने आयोग बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाएर छपाइ गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । मतदाता नामावलीको छपाइ भने आयोगले आफ्नै छापाखानामा छाप्ने तयारी गरेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: नयाँ खुशीको खबर ! अब फेसबुक म्यासेन्जरबाटै पैसा लेनदेन गर्न सकिने
NEXT POST Next post: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सरकारलाई राय सुझाव दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री दाहाल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र २०, २०७३ १०:५६